Sida loo beddelo astaamaha app -ka mobilada Android | Androidsis
Ignacio Sala | 13/08/2021 12:00 | Codsiyada Android, Tababarada
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu shaqsiyeeyo, intii suurtogal ah, casrigayaga si uu ula qabsado adeegsigayaga. Laakiin haddii lagu daro, waan awoodnaa wax ka beddel bilicsanaanta ay na siiso, ka fiican ka fiican. Dareenkan, Android waa boqorka nidaamyada hawlgalka mobilada, maadaama ay ka duwan tahay macruufka, waxay na siisaa tiro badan oo ikhtiyaarro is -habeyn ah.
Haddii la adeegsanayo soo -saareyaal, mawduucyada mawduuca ama wax laga beddelo muuqaalka asalka ah, muuqaalka muuqaalka ah ee casriga ah ayaa si dhakhso leh isu beddeli kara. Laakiin, haddii lagu daro, annaguna waxaan rabnaa beddel astaamaha barnaamijka, waxaan sidoo kale ku sameyn karnaa codsiyadaan.
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan hababka la heli karo beddel astaamaha app -ka ee Android Waxaan kugu casuumayaa inaad sii waddo akhrinta maqaalkan oo aan ku tusno dhammaan xulashooyinka aan haysanno, bilaash iyo lacagba, si loo fuliyo geeddi -socodkan.
1 Iyada oo loo marayo xulashooyinka horumariyaha
2 Adeegsiga soosaarayaasha dalabka iyo xirmooyinka icon
2.1 Nova La Shaqeeye
2.3 Hawlaha La Shaqeeyaha
2.5 Xidhmada Icon Xidhmada
2.5.1 Gawaarida - Xirmada Icon Caddaan
2.5.2 Xidhmada Icon Minma
2.5.3 Icon Xidhmada Icon
3 Mawduucyada shaqsiyeynta
Iyada oo loo marayo xulashooyinka horumariyaha
Kahor intaadan adeegsan codsiyada dhinac saddexaad, waa inaan ogaano, hooyo, waxaan haysannaa ikhtiyaar aan ku beddeli karno dhammaan astaamaha codsiyada aan ku rakibnay kombiyuutarkeenna.
Doorashadan waxaa laga heli karaa Ikhtiyaarrada horumariyaha, ikhtiyaarrada la dhaqaajiyo iyada oo si joogta ah loo gujiyo lambarka dhismaha ee aaladdayada.
Marka la hawlgeliyo, waxaan galnaa xulashada menu ee soo -saareyaasha oo raadi qaybta Mawduucyada. Qeybtan dhexdeeda, guji Qaab muuqaal ah
Kadibna menu ayaa lagu soo bandhigi doonaa ikhtiyaarro kala duwan ayaa la bixiyey. Kaliya waa inaan dooranaa midka aan ugu jecel nahay.
Adeegsiga soosaarayaasha dalabka iyo xirmooyinka icon
Laakiin haddii waxa aad rabto ay tahay inaad u beddesho astaanta mid kale oo aadan ahayn qaabkeeda, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan u leenahay inaan ku fulinno shaqadan waa isticmaalaya app launchers. Soo -saareyaasha qaarkood waxaa ku jira ikhtiyaarro lagu beddelo qaabka astaamaha, laakiin midkoodna ma bixiyo astaamo lagu beddelo kuwa jira.
Soo -saareyaasha badankood waxay noo oggolaadaan inaan adeegsanno xirmooyinka sumadda ee laga heli karo Dukaanka Play -ka, marka waa inaan hubinnaa faahfaahinta soo -saare kasta ka hor inta aannaan dooran midda aan dooneyno inaan u isticmaalno si aan ugu habeynno terminaalkayaga astaamo cusub. Waa inaan sidoo kale hubinaa haddii xirmada sumadda ee aan rabno inaan isticmaalno waxay la jaan qaadi kartaa bilawgeena.
Waxaan haysanaa wax yar ama wax aan ka sheegno Nova Launcher oo aadan aqoon. Tani waa mid ka mid ah soo -saareyaasha dhammaystiran ayaa laga heli karaa Dukaanka Play, maadaama ay na siiso tiro aad u badan oo ikhtiyaarro ah si aan u shaqsiyeynno aaladdayada marka lagu daro ku -habboonaanta xirmada sumadda.
Codsigan wuxuu ku leeyahay qiime dhan 5,49 euro, ama 3,99 euro, oo ku jira Dukaanka Play, qiime u ekaan kara mid sare haddii aadan garanayn dhammaan xulashooyinka ay na siiso. Runtii waxaa mudan in la bixiyo lacagtaas si aad awood ugu yeelatid inaad u habayso terminalkeena ugu badnaan.
Soo -saare kale oo caan ah oo laga heli karo Android la jaan qaada baakadaha sumadda Sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash, waxaan ka helnaa Microsoft Launcher, codsi ku habboon haddii aad si joogto ah u adeegsato codsiyada Microsoft, maadaama ay noo oggolaaneyso inaan had iyo jeer gacanta ku hayno.
Haddii kale, kani waa mid ka mid ah codsiyada yar ee la jaan qaada baakadaha sumadda ee aad si bilaash ah uga soo dejisan karto. Codsigu wuxuu leeyahay celcelis qiimeyn ah 4,7 xiddigood 5tii suurogal ah ka dib markii la helay wax ka badan 1.3 milyan dib u eegis. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib oo waxaan ka soo dejisan karnaa iskuxirka soo socda.
Launcher Action waa mid kale oo ka mid ah codsiyada noo oggolaanaya inaan u adeegsanno xirmada sumadda beddel astaamaha app. Waxay noo oggolaaneysaa inaan ku darno dariiqooyin gaagaaban si aan u socodsiino codsiyada, waxay noo oggolaanaysaa inaan ku soo ururino codsiyada faylalka ku jira faylyada leh animations aad u soo jiidasho leh ...
Codsigan waxaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo gebi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsiyada gudaha-app si aan u helno dhammaan xulashooyinka ay na siiso iyo, si kadis ah, u tirtir xayeysiisyada.
Tirada xulashooyinka uu Apex Launcher na siinayo ayaa ah aad ugu eg kan ay bixisay Nova Launcher, oo ay kujirto suurtagalnimada in lagu daro xirmooyinka sumadda. Si kastaba ha ahaatee, waxay na siisaa xoogaa ikhtiyaarro ah oo laga heli karo. Apex Launcher waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo lacag la'aan ah oo lacag leh oo aan ku awoodno:
Kordhinta khaanadaha arjiga, u oggolaanaysa ku -daridda faylal ku jira fayl.
Ogeysiisyada tirinta aan la akhrin
Hawlgal iyada oo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqyo qof ahaaneed leh hal ama laba farood.
Tiro badan oo saamaynta kala guurka ah.
Fursadaha widget -ka horumarsan
Xidhmada Icon Xidhmada
Iyada oo ay weheliso soo -saareyaasha aan kor ku tusay, waxaan u baahanahay inaan soo dejino xirmooyinka sumadda ee laga heli karo Dukaanka Play. Inkasta oo ay run tahay inaan ka heli karno tiro badan oo iyaga ka mid ah, waxaan hoos ku tusi doonaa saddexda doorasho ee ugu fiican ee la heli karo.
Gawaarida - Xirmada Icon Caddaan
Naqshadeynta ugu yar, waxaan ku helnaa Whicons, oo ah codsi gacmaheena ka badan 7000 oo astaamood oo cadcad oo aan u adeegsan karno inaan ku beddelno astaamaha caadiga ah ee codsiyada aan ku rakibnay kombiyuutarkeenna.
Codsigan wuxuu la jaan qaadayaa inta ugu badan ee bilawga ah, waxaa loo heli karaa si bilaash ah, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad ku iibsato gudaha-app si loo furo gelitaanka dhammaan astaamaha, astaamaha lagu kala saaray mawduuca.
Xidhmada Icon Minma
Hadaad jeceshahay nalalka neon, xirmada dalabka aad raadineyso waa Minma Icon Pack, xirmo sumad ah oo na siineysa in ka badan 1.100 astaamood oo kala duwan si loogu beddelo kuwa ka mid ah codsiyada aan ku rakibnay kombiyuutarkeenna.
Codsigan waxaa lagu heli karaa si lacag la’aan ah, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad ku iibsato gudaha-app si loo helo dhammaan waxyaabaha ku jira, waxa ku jira oo lagu kala saaray qaybo kala duwan.
Developer: Rohit waa shetty
Icon Xidhmada Icon
Xirmooyin kale oo xiise leh oo loogu talagalay Android ayaa laga heli karaa Icon Pack Studio, oo ah astaamo waxyar ka duwan naqshadeynta codsiyada ku darista saamaynta hooska, garka, nalalka, qaab -dhismeedka.
Icon Pack Studio ayaa diyaar u ah soo dejinta bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad iibsato gudaha arjiga si loo helo dhammaan waxyaabaha ku jira.
Haddii aadan dooneynin inaad ku adkeyso jiritaankaaga barnaamijyada bilowga ah iyo xirmada sumadda, ikhtiyaarka ugu dhaqsaha badan ee lagu beddelo astaamaha app waa in la isticmaalo mid ka mid ah mawduucyada laga heli karo Dukaanka Play.
Mawduucyadan ayaa beddelaya sawirka gidaarka iyo astaamaha codsiyada aan rakibnay. Ma oggola wax ka beddelidda markaa haddii aadan jeclayn qayb ka mid ah naqshadda, waa inaad heshaa mid kale ama aad maskaxdaada ku waafajisaa isbeddelka.
Mawduucyadan waxay gaar u yihiin soo -saare kastaMarkaa haddii aad haysato taleefanka Samsung, waa inaad raadisaa mawduucyada Samsung. Haddii walaalahaaga ku jira Xiaomi ama soo -saare kale, waa inaad raadsataa mowduucyada moodalkaas. Sababtu ma aha mid kale oo aan ahayn lakabka habaynta ee uu soo saare kastaa bixiyo.
Soo -saare kasta wuxuu adeegsadaa naqshad ka duwan tus astaamaha dalabka. Codsiyada mawduuca waxaa loo habeeyay qaabkan si ay u bixiyaan mawduucyada nooc kasta leh, mawduucyo gaar ah oo loogu talagalay boosteejooyinkaan oo aan ku adeegsan karno aaladaha kale, in kasta oo natiijadu inta badan ka tagto wax badan oo la doonayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo beddelo astaamaha app -ka taleefannada Android
Cubot MAX3 cusub oo leh ku dhawaad ​​7 inji oo shaashad ah. Mid ku hel mid bilaash ah (Bixinta)